Waraanni Mootummaa Liibiyaa Hidhattoota Khaliifaa Haftaar irratti haleellaa jalqabuu gabaafame - NuuralHudaa
Waraanni Mootummaa Liibiyaa Hidhattoota Khaliifaa Haftaar irratti haleellaa jalqabuu gabaafame
Hidhattoonni Jeneral Khaliifaa Haftariin hogganaman kan Waraana Biyyoolessa Liibiyaa (LNA) jechuun of moggaasan, guyyoota lamaan dabran misaa’elaan haleellaa magaalaa Tripolii keessatti raawwataniin, buufata xiyyaaraa guddicha magaalattii keessatti argamu kan barbadeessan tahuu gabaafame. Gareen Emreets fi Raashiyaan deeggaramu kun yoo xiqqaate misaa’ela 100 ol gara magaalattiitti kan dhukaase yoo tahu, Xiyyaarotaa fi qabeenya barbadaayeen alattis misaa’ela naannawa jireenyaa rukuteen namoonni nagayaa jaha kan du’an tahuus odeeyfannoon ni addeessa.
Haleellaa kana hordofuun mootummaan biyyattii beekamtii UN qabu, kan Turkiyaan deeggaramu halkan kaleessaa irraa jalqabee buufata garee kanaa irratti haleellaa jalqabuu gabaafame. Waraanni mootummaa duula kanaan Kaampii gareen Khaliifaa Haftaar rokkotee fi misaa’ela irraa furguuggatu, kan magaalaa Triipoolii irraa gara Kibbaatti argamu to’achuuf kan karoorfate tahuu gabaasni Aljaziiraa ni mul’isa. Ogeeyyonni waraana Raashiyaa Khaliifaa Haftaar deeggaranis buufata kana keessa kan qubatan tahuus gabaafame.
Waraanni Biyyoolessaa Liibiyaa jeneraal Khaliifaa Haftaariin hogganamu, waggaa tokko dura magaalaa Triipoolii too’achuuf duula jalqabeen nannoolee heddu kan dhuunfatee ture tahus, ji’oota muraasaa asitti, keessumattuu eega Turkiyaan mootummaa beekamtii UN qabu deeggaruuf loltoota isii gara Liibiyaa ergitee booda, gareen kun naannoolee to’ataa ture heddu kan dhabe tahuus odeeyfannoon ni addeessa.